Mogadishu Journal » Wararkii ugu dambeeyey dad Shacab ah oo hal Goob lagu dilay
Mjournal :-Maleeshiyaad la sheegay inay ku hubeysnaayeen Qoryaha AK47 ayaa xalay waxaa ay tiro dad Shacab ahaa ku dileen Maqaaxi ku taalla Xaafad ka tirsan degmada Kaxda ee Gobolkan Banaadir, iyaga oo intaasi kadib goobta ka baxsaday.
Ragga hubeysan ayaa rasaas ku furay dadka Shacabka ah oo maqaaxida ku shaaheynayay,waxaana la xaqiijiyey in weerarkasi ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen in ka badan 10 Ruux.
Arrintaan ayaa loo aaneynaa inay la xiriirto aano qabiil,iyada oo todobaadyadii la soo dhaafay degmada Kaxda ay ka taagneyd xiisad u dhaxeysay laba maleeshiyo beeleed,waxaana la sheegay in beelaha ay kala wataan laba ciidan oo ka wada tirsan kuwa Dowladda Soomaaliya.
Ehelada dadka xalay degmada Kaxda lagu dilay laguna dhaawacay ayaa waxaa ay sheegeen inay ka walaacsan yihiin xaalada Caafimaad qaar kamid ah dadka oo dhaawacyadooda ay yihiin kuwa culus.
Weli Hay’adaha Ammaanka Dowladda Soomaaliya wax war ah kama soo saarin kooxdan hubeysan ee xalay iyo maalmo kale dad Shacab ah ku laayey Gudaha degmada Kaxda ee Gobolkan Banaadir, iyada oo weli xiisad dagaal laga dareemayo degmadaas.